Marka la dhamaystiro hawsha dib u dhiska iyo dayactirka, dugsigu wuxuu noqon doonaa mid si buuxda u shaqaynaya tusaalena u ah dugsiyada kalee hoyga ah ee gobolka ku yaal, isla markaana siin doona waxbarasho la tahli karo caruurta iyadoo tixgelinta ugu waynna la siinayo caruurta reer guuraaga ah. Dugsiga waxa lagu qalabeyn doonaa, agabka waxbarashada, adeegyada hoyga, buugaag, rugta akhriska, qalabka tijaabooyinka lagu sameeyo, macalimiin iyo shaqaale maamul ah. Tani waxay u sahli doontaa caruurta reer guuraaga ah ee ku nool gobolka Sanaag in ay helaan wax barashada dugsiga sare oo tayo leh.
Xafladdan dagax-dhigga waxa gudoominayay Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Mudane, Cabdillaahi Ibraahim Habane, waxa kale oo ka soo qayb galay xubno sarsare oo ka tirsan dowladda oo uu ka mid yahay Badasaabka gobolka Sanaag Mudane, Axmed Cabdi, Duqa magaalada Ceerigaabo Mudane, Ismaaciil X. Nuur iyo dad ka socday bulshada gobolka.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Mudane, Cabdillaahi Ibrahim Habane ayaa ka hadlay ahmiyadda waxbarashada iyo sida ay waajib u tahay in da’yarta wax labaro. Waxa kale oo uu ku amaanay qaadhaan bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) taageerada ay marwalba la garab taagan yihiin Somaliland ee dhinaca waxbarashada iyo horumarinta. Isagoo ka hadlaya furitaankii munaasabada dhagax dhigga dhismaha iskuulka wasiirku waxa uu yidhi “Waxbarashadu waa aasaaska nolosha. Haddaynaan waxbarashada xoojin horumar ma gaadhayno tusaale ahaan ilmaha yar hadii aan wax labarin naftiisa iyo waalidkii midna waxba ma tari karo. Iskuulkan waxa uu xidhnaa in kabadan 25 sano. Wasiiradii iga horeeyay ayaa hawshan soo bilaabay aniguna halkaas baan kasii qaadayaa ilaa dhamaystirka. Dugsigan waxa ka faai’daysan doona caruurta kunool gobolka Sanaag gaar ahaan kuwa reer guuraaga ah si ay waxbarashada dugsiga sare u dhamaystirtaan kana kooban gabdho iyo wiilal. Dhismaha iskuulka marka uu dhamaado waxa lagu qalabayn doonaa dhamaanba waxyaabihii sahli lahaa in ardaydu sifiican oo tayo leh wax u bartaan sida, macalimiin xul ah, buugaag, rug akhris, rug tijaabo iyo agabka hoyga.”